ယခုနိုဝင်ဘာလဆွေးနွေးပွဲတွင် အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ဘဏ်အတိုးနှုန်းကို ယခင်အတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်ထားရှိလိမ့်မည်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါသည်. ဒီဇင်ဘာဆွေးနွေးပွဲတွင်သာ အတိုးနှုန်းတင်လိမ့်မည်ဟု တွက်ဆထားကြပါသည်. ယခုလ ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပါ အတိုးနှုန်းတင်မည့်အကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာပြောဆိုမည့်ပုံမတွေ့ရနိုင်ဟုပါ ခန့်မှန်းထားကြတာဖြစ်ပါသည်.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Fed၏ အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အား နိုဝင်ဘာ ၁ရက် ၂၀:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ရာ ထိုထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဒီဇင်ဘာတွင်အတိုးနှုန်းတင်ရေးအတွက် သဲလွန်စများကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်. ထိုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် USDအပေါ်တွင် သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ရာ ထရိတ်ဒါများအနေဖြင့် ထိုထုတ်ပြန်ချက်ကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်.